Darpan Nepal – होटल तथा क्सासिनाे मजदुरहरूले अब आन्दोलन नै गर्न नपाउने !
होटल तथा क्सासिनाे मजदुरहरूले अब आन्दोलन नै गर्न नपाउने !
काठमाडौं । नेपालको संविधानले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर होटल तथा क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरहरुले आगामी दिनमा आफ्नो अधिकार माग गरेर आवाजसमेत उठाउन नपाउने भएका छन् ।
गत जेठ १८ गतेदेखि लागू हुने गरी मजदुर नेता र होटल सञ्चालकको बीच मजदुर अधिकारलाई असर हुने गरी सम्झौता भएको पाइएको हो । मजदुर नेता र होटल सञ्चालकबीच भएको १९ बुँदे सम्झौता मजदुरकै लागि घातक रहेको भन्दै मजदुरले असन्तुष्टि जनाएकाे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रले छापेकाे छ ।
Previous Postरनकुमारको ‘बेकावु छ माया’ सार्वजनिक Next Postमुम्बई हमलाका मुख्य योजनाकार दाउदमाथि जेलभित्र साङ्घातिक हमला : अवस्था गम्भिर, आइसियूमा राखेर उपचार थालीयो